Iyi ndiyojaja uye rutsigiro Amber yeApple Watch | Ndinobva mac
Iyi ndiyo Amber charger uye rutsigiro rweApple Watch
Zvakawanda zvave zvirevo zvatakakuratidza pane yedu blog maererano nezvetsigiro uye mabhatiri ekunze aunogona kushandisa neyako yakakosha Apple Watch. Nhasi tinodzokera pakurwiswa nesarudzo nyowani iyo panguva imwe chete inoita sechaja yeApple Watch uye sechaja inogona kuita chimwe chishandiso senge iPhone nekuda kwebhatiri rayo remukati. Ndezve iyo amber bhokisi, bhokisi rinochengetera mukati meinodiwa nzvimbo yekuchengetera Apple Watch pamwe nebhatiri iro Tinogona recharge kuti tiwedzere kuzvitonga kana tikazoenda parwendo newachi.
Amber haizi nyaya chete uye ine bhatiri hombe iro rinopa mukana wekugadzira akati wandei wachi yacho pasina kuibaya mune yemagetsi adapter. Inoshanda yakafanana neiyo Apple yaita mubhokisi diki umo maAirPod matsva achazotengeswa.
Sezvatakakuudza, iyo dombo shora Iri bhokisi rakaumbwa sekrisimasi prism nemakona akapoteredzwa uye rakagadzirwa nepurasitiki nealuminium. Mativi acho akagadzirwa nealuminium anodized mune mana anogona mavara, nzvimbo grey, yakakwira goridhe, goridhe uye sirivheri. Mukati medu tinogona kuona kuvapo kwerutsigiro runobviswa apo patichafanirwa kukwenya tambo yekuchaja induction yeApple Watch. Mushure mekuputira tambo pane bracket, chifukidziro chekudzivirira chakaiswa uye isu tinogona kutowana Apple Watch mukati kuti iite recharging.
Pane chivharo chebhokisi tine bhatani uye mamwe maLED ayo kana akatsimbirwa anotiudza kuti yakawanda sei bhatiri inowanikwa. Uye zvakare, ivo vagadziri veAmber vakagadzira kunyorera kweiyo iPhone yekudyidzana nayo uye nekudaro vanoziva iyo chaiyo huwandu hwebhatiri pamwe nenhamba yekuchaja macircuit akaitwa. Muridzi a 3800 mAh bhatiri remukati iyo inokwanisa kudzorerazve yako Apple Watch ka6 uye yako iPhone 6 kana ka8 nguva iyo Apple Watch. Mutengo wacho i $ 99 uye iwe unogona kuiwana pakero inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyi ndiyo Amber charger uye rutsigiro rweApple Watch
Maitiro ekugadzirisa kudzokorodza kwetsamba mune refu yekudhinda
Isu takaedza base yekuchaja yeChoetec Apple Watch